Ungasikhombisa kanjani isithombe esifanayo ezitolo eziningana? - Easy Multi Khombisa
Idalwe Qalile 28 / 05 / 2021
10. Ukulondolozwa Kwe-Intanethi
Kunjalo! Nge-Easy Multi Display ungabonisa kalula isithombe esifanayo ezitolo eziningi! Sikunikeza okokufundisa okusheshayo nokulula ukumisa amafolda akho. Njengoba ifu liyisevisi eku-inthanethi, kufanele uqaphele futhi ukhethe insizakalo ebucayi. Ngezansi, siphakamisa izinkampani ezintathu ezidume kakhulu zokubamba emakethe.
Kulesi sibonelo, sizosebenzisa I-OneDrive kepha ungasebenzisa enye insizakalo yefu efana ne- -Google Drive or I-DropBox.
Setha ukwakheka kwefolda efanayo ku-OneDrive (noma ezinye izinkampani zokubamba amafu) zawo wonke amabhizinisi akho.
Ngemuva kwalokho, nikeza igama elifanayo kumafayili ofuna ukuwasebenzisa ezitolo zakho. Lapha, saqamba isithombe sethu ngokuthi "Welcome_pharmacie". Kopisha lesi sithombe kumafolda akho amabili.
Uma ufuna ukushintsha isithombe nevidiyo ngokushesha ngeselula noma i-PC yakho, shintsha isithombe esidala ufake esisha ngenkathi ugcina igama lefayela. Ngeke kudingeke wenze ushintsho ku-Easy Multi Dislay, isithombe esisha sizokhonjiswa ngokuzenzekelayo.
Siyakwamukela ekhemisi uBiarritz
Siyakwamukela ekhemisi Guethary
I-Raspberry Pi Compute Module 4 Amandla Amandla we-Digital Digital
'I-Vegas Means Business' imaka isikhangiso sokuqala ku-Resorts World's screen
Amathiphu ayi-7 wokuthuthukisa izimpawu ezidijithali ezesabekayo